Ny androaniko | Lasalasa fisainana
[Lasalasa fisainana ] 30 Oktobra, 2016 08:16
'Tiako ianao' lé raha eto ...
Efa elaela ihany aho no saika handrakitra ity dingana iray mba vitako tamin'ny fiainako ity tato saingy tsy nirototra loatra fa nataoko hoe tsy zava-dehibe mila tsarovako loatra. Fa roa andro mifanesy izao dia misy namana roa miteny zavatra mamerina ahy hieritreritra azy ity foana.
Nandritra ny folo taona mahery aho niasa tamina ramatoa izay, efa 70 taona any ho any izy izao angamba satria latsaka kelin'izay izy tamin'izany. Ny reniny efa 90 angamba zay na mahery. Tsy dia misy asabe manakory natao tao aminy fa matetika dia lany andro miresaka zahay mianaka. Saingy telo na efa-taona lasa nony tsy nanana fiara intsony aho dia tsy nety tamiko intsony lay nankany aminy. Avy hatrany dia reny ny fahabangana ka nony afaka volana vitsivitsy dia nantsoiny foana aho hoe rahoviana ianao no hiverina. Tsy izay irery anefa ny olako saingy kamo be aho hitantara aminy dia avy dia tsy novaliako intsony ny antsony. Dia navelako tany izy. Misy fotoana anefa dia miasa ny saiko hoe efa nahazo taona izy mianaka, raha sanatria tonga ny andro tsy haha-eo azy intsony dia mety hanenenako izao fahanginako izao ka tokony mba hamangy azy ihany aho. Nefa tsy vitako foana ilay izy fa tena tsy te-hitantara aminy ny olako aho fa haiko fa tsy ho tanako ny ranomasoko fa izaho bekoretaka izay.
Fa tamin'ny iray volana lasa izay dia noraisiko an-tànana ny heriko rehetra, tsy maintsy tonga any aho hoy aho. Noraisiko ny fiarabe iombonana dia lasa aho. Kanjo - soa ihany, vintana angamba hoy aho, hehehe - tsy tao izy. Dia hoy aho hoe tsy maintsy antsoiko izy izany ilazako hoe eto aho ary andrasako izy raha efa akaiky hody. Satria raha mody fotsiny aho dia tsy ho fantany mihitsy hoe "efa tonga nitady azy". Nantsoiko izy fa hay lasa vao maraina nankany amin'ny tranony any an-tendrombohitra izy mianaka nanao faran'ny herinandro.
Dia nolazaiko azy hoe izaho ato am-baravarana saika hanao mamikely anareo mianaka. Efa ela aho no saika handalo fa tsy ampy herin-tsaina hiresaka (sady kendan-dranomaso ihany aho miresaka amin'ny finday, tsssss) fa androany tena nataoko izay nandalovana. Faly be izy naheno ny feoko ary mino aho fa azony ny toe-panahiko nahatonga izay rehetra izay fa izy indray no nankahery ahy. Nahatsiaro tena faran'izay maivana aho nony avy nanidy finday. Tsy dia fanaoko izay dingana izay kanefa dia vitako satria tena tsy nandry ny saiko.
Ka naharay mailaka avy amin'ny namana iray aho zao maraina izao dia nanganohano kely indray ny masoko. Teto amin'ny blaogasifera no nampinamana anay tamin'izany, niara-nitolona tamin'ny fanaovana asa-soa sy niara-nivanitika tamin'ny hagegena ihany koa, dia avy teo nifampitarika tany amin'ny facebook. Nony niala tany aho dia mbola vitsy aloha hatramin'izao ny namana nanoratako mailaka na nafarako olona hampita kopa-tànana. Ka ankoatra azy ireo, sy ianareo zay mamangy ity blaogiko ity, dia misy ny namana manomboka miasa saina any hoe nisy inona no tsy hita intsony aho. Anisan'ireny izy saingy soa fa tsaroany hoe voarakitra tany amin'ny blaoginy tamin'izany ny adiresiko dia io izy nanoratra io : matahotra aho sao dia vaovao ratsy ny aty amin-dry fa tiako indry, tena tiako be [...] Mba omeo vaovao akia aho.
Dia avy hatrany koa dia ny tenin'ilay namana iray omaly no niverina tao an-dohako raha nizara ilay hiran'i Gildas Arzel hoe "Avant de t'aimer" izy. "Aza hadino mihitsy, hoy izy, ny miteny hoe tiako ianao amin'ny olona izay tianao fa mandalo fotsiny ihany izao fiainana izao."
Manampy trotraka izany ny famaranan-dresakay sy Angie Boutax ary sefo Hery matetika hoe "tiako be nareo an, aleo lazaina zao sy averimberina ihany fa tena tsy hay ny rahampitso". Sady miaraka manao zavatra ara-sosialy ihany izahay telo mianadahy no mifanafatrafatra foana.
Fiaraha-moninay atý Italia miaraka amin'ny COVID-19
Olona avy Italia tsy mahazo miditra any Madagasikara - #coronavirus